မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ လက်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်းရာနှင့် ချီသော ညှိုးငယ်စွာ နေခဲ့ရသောကြောင့် တိုင်းပြည်၏ လူများစု ဖြစ်သော တောင်သူလယ်သမားများမှာ လူစဉ်မမှီဘဲ အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ခံရသည်။ ထိ်ုအခြေအနေသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် လွတ်လပ်ရေးရသည် အထိ ဆက်လက် တည်ရှိ ခဲ့ရသည်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဖဆပလ အစိုးရ လက်အောက်တွင် တောင်သူ လယ်သမား တို့ ဘ၀သည် ထူးခြားစွာ တိုးတက်ခြင်းမရှိဘဲ ဒုံဟောင်းဘ၀ထဲ၌ လည် ပတ်နေရသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ( ၂ ) ရက် နေ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက်သို့ ရောက်သောအခါ တောင်သူလယ်သမားတို့၏ ဘ၀သည် ပြောင်းလဲမှု အချိုးအကွေ့ ရောက်ရှိလာသည်။ တောင်သူလယ်သမားများသည် အဓိကကျသော အင်အားစုကြီးဖြစ်၍ ထိုတောင် သူလယ်သမားတို့အား အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုသော နေ့တစ်နေ့ သည် ထီးထီးထွက်ပေါ်လာရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေကြောင်း နှိးနှောဖလှယ်ပွဲများမှာ တောင်သူဦးကြီးများက ပြခဲ့သဖြင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ် မှ စ၍ နှစ်စဉ် ဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက် နေ့တွင် တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
ဇန်န၀ါရီလသည် တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် လယ်ရာရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဇန်န၀ါရီလသည် အင်္ဂလိပ်နှစ်သစ်၏ အစလဖြစ်၍ နှစ်သစ်ကူးကာလကို ဂုဏ်ပြုသလိုဖြစ်နေခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ယင်းနေ့အစား တော်လှန်ရေးကောင်စီ သမိုင်းပေးတာဝန်အရ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို စတင် ထမ်းဆောင်သောနေ့ဖြစ်သော မတ်လ(၂)ရက်နေ့ကို တောင်သူလယ်သမားနေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးသင့်ကြောင်း တင်ပြကြသဖြင့် မတ်လ(၂)ရက်နေ့ကို တောင်သူလယ်သမား နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် တညီတညွတ်တည်း သဘောတူခဲ့ကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း တောင်သူလယ်သမားများသည် အသက်ရှင်ရေး အတွက် အဓိကဖြစ်သော ဆန်စပါးနှင့် အခြားသီးနှံများကို ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာဖြင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေသူများဖြစ်သောကြောင့် သူတို့သည် နိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးရှင်များလည်း ဖြစ်ကြသည်။သူတို့၏ ကျေးဇူးတရားကို မမေ့ဘဲ သူတို့ဘ၀ ဖွံဖြိုးတိုးတက် သာယာလာအောင် ကြံဆောင် ကြိုးပမ်းပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်သင့် ကြသည်။သို့သော် တောင်သူလယ်သမားတို့၏ ဘ၀နှင့် တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေး ဘ၀သည် တစ်ဆက်တည်း ရှိနေသဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်သင့်ကြသည်။
သို့သော် တောင်သူ လယ်သမားတို့၏ ဘ၀နှင့် တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေးဘ၀သည် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ရှိနေသဖြင့် တောင်သူလယ်သမားတို့၏ ကျေးဇူးကို ပြန်လည်ပေးဆပ်လိုလျှင် နိုင်ငံတော်ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၌ ကျရာတာဝန် များကို ကျေပန်စွာ ထမ်းဆောင်ခြင်းသည်သာ အဓိပ္ပာယ် အရှိဆုံး၊အထိရောက်ဆုံးသော ပေးဆပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနားလည် သင့်ကြပေသည်။
(၄၈) နှစ်မြောက် တောင်သူလယ်သမားနေ့ကိုဂုဏ်ပြု၍ ."
ရေးသားသူ poemflower at Monday, March 01, 2010
နန်း March 1, 2010 at 11:21 PM
အနမ်း March 2, 2010 at 1:31 AM
တောင်သူလယ်သမားနေ့ ဂုဏ်ပြုပိုစ့်လေးလာဖတ်သွားပါ တယ်ညီမရေ။
လင်းကြယ်ဖြူ March 2, 2010 at 3:51 AM
စပါး ကျည် ကို ရဲရဲတင်းတင်းဆောက် လို့
အစဉ်ခိုင်တဲ့ လက်တွေ ကို ဆွဲကိုင် ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါ၏.
ဇွန်မ March 2, 2010 at 6:51 PM
အမရေ နေ့ထူးရက်မြတ်လေးအကြောင်း လာဖတ်ရင်း ကိုလင်းကြယ်ဖြူရဲ့ ကဗျာကောင်းလေးကို ဖတ်သွားတယ်
YoungGun March 3, 2010 at 11:30 PM
မဖတ်ရသေးတာတွေ အကုန်ဖတ်သွားတယ်။ အထူးသဖြင့် အသည်းလေး ကျန်းမာဖို့..နဲ့ အခုပို့စ်ပဲ ..ဘာသာရေးကတော့ ဝေးလို့ဗျာ။ တောင်သူလယ်သမားနေ့အကြောင်း အခုမှ အစုံအစေ့ သိရတယ်. ကျေးဇူးပါလို့။
ဇော်သိင်္ခ March 4, 2010 at 7:48 PM
တောင်သူလယ်သမားနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အကြောင်းလေးကို သိလိုက်ရတဲ့ အတွက်ကျေး ဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ.. ကျွန်တော်တို့လိုတောင်သူ တွေ အနေနဲ့ အဲဒီနေ့ကိုတော့ ပိုပြီး မမေ့သင့်တဲ့ နေ့လေး ဖြစ်ပါတယ်..
kokomaung.uk March 7, 2010 at 7:41 PM
တောင်သူလယ်သမားနေ့အကြောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သယ်ရင်းရေ့။ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ။
ငွေဆောင်ကမ်းခြေ. . . .
မြတ်မိခင်၏ သားအချစ်နှင့် မျိုးချစ်မာန
ချောင်းသာကမ်းခြေသို့. . .
အကောင်းဆုံးမို့ ဆွမ်းတော်တင်ထားပါတယ် . .